Cinefy Professional iPhone Ukuhlelwa kweVidiyo | Martech Zone
Cinefy Ingcali yeVidiyo ye-iPhone yokuHlela
NgoLwesibini, Novemba 29, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Indawo enye yokuthengisa umxholo esifuna ukuyonyusa kukusetyenziswa kwevidiyo. Kudala ndibona indlela ezinye iiblogi eziyisebenzise ngayo ividiyo kodwa ndiyaqikelela ukuba ndiyinto encinci… ndifuna into engcono. Sonke sihamba ngeenxa zonke ngeekhamera ze-HD kwaye izixhobo kulula ukuzisebenzisa, kungoko kutheni ndinokuqhekeza kunye ezinye zevidiyo ezonwabisayo endinazo nomntu kwaye ndiyityhalele kule bhlog yethu esisebenze nzima ukufikelela kuyo umgangatho wobunjani?
Kubonakala ngathi izinto ziya kuba lula ngokukhawuleza kakhulu kubasebenzisi be-iPhone, kunye nokukhululwa okungapheliyo kwe-beta Cinefy ngaphandle kwintengiso. Nantsi into eteketisa ngemveliso yohlobo lokuhlela olunokufezekiswa… ikuvumela ukuba uhlele ividiyo, yongeze iziphumo, kwaye ukhethe neengoma ezingenamalungelo okushicilela.
I-Cinefy luhlengahlengiso lwevidiyo ehambayo kunye neqonga leziphumo kwi-iPhone apho abasebenzisi bayila kwaye babelane ngeevidiyo ezixutywe kunye neziphumo ezibonakalayo ezikumgangatho ophezulu. I-Cinefy ixhobisa abasebenzisi ngaphandle kwezakhono zokuhlela ukuba bafake ngokukhawuleza i-footage, yongeza umculo, kwaye usebenzise iimpembelelo ezibonakalayo ezibonakalayo kunye ne-interface enomdla kwaye ilula.
"Senze uCinefy ukuba abeke ezona zixhobo zemveliso zaseHollywood ezithandekayo ngqo ezandleni zomsebenzisi," utshilo uDan Hellerman, umphathi weApp App Network. "Ukukwazi ii-studio ukukhuthaza iimveliso zazo, ngokuxhobisa abasebenzisi ngezona zinto zinemveliso kwimidlalo yabo, sisixhobo sokuthengisa esinamandla."
KwiCinefy, iipakethi ezinezinto ezizodwa okanye ezinophawu ziyafumaneka kukhuphelo losetyenziso, zibonelela ngeTV nakwizitudiyo zomdlalo ukubanakho ukuthengisa iipropathi ezintsha ngendlela edala ukubandakanyeka okunomdla kunye nokubakho okukhulu kwentsholongwane.
Umculo onobuhlobo isebenzisane ne-Chairseven kunye ne-App Creation Network ukubonelela i-Cinefy ngokufikelela kwikhathalogu yayo ebanzi yeengoma ezisuswe kwilungelo lokushicilela eziyilelwe ukwenza isandi esigqibeleleyo, esifumaneka ngeCinefy eyakhiwe kwilayisensi enqakrazo olunye. Umculo onobuhlobo yingqokelela yomculo wokuqala eyilelwe umxholo owenziwe ngumsebenzisi, unikezela nge-100% yomthetho nawo onke amalungelo acocekileyo omculo kwindalo yakho yobuqu kunye nesiko kwi-intanethi.
Yakhelwe ukuba intlalontle, uCinefy uya kuthanda thumela ngokuthe ngqo kwi-Facebook, kwi-YouTube, nakwiVimeo. Ukongeza, abasebenzisi banokugcina iifayile zeprojekthi ezininzi kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kwikhamera yezixhobo zabo. Kwixesha elizayo, iCinefy iya kwenziwa ifumaneke kuzo zombini izixhobo ze-iPad kunye ne-Android, kwaye iya kuvumela abasebenzisi ukuba bafikelele kwiziphumo zabo ezikhutshelweyo kuso nasiphi na isixhobo.
Itekhnoloji yokuhlela kaCinefy isisiseko iyafumaneka kwilayisensi enelebheli emhlophe kubathengi benkampani abafuna ukwakha nokwazisa amaqonga abo okupapasha ividiyo. Kwi studio okanye ezonyuselo, iipakethi zeCinefy zinokuqulatha phakathi kwe-10-15 uphawu lokubonwayo okanye imifanekiso eshukumayo, kwaye zinokuhanjiswa njengokukhutshelwa simahla okanye okuhlawulelweyo. Iziphumo zokupakisha zinokuyilwa ukuba ziqulathe izinto zenkxaso yomntu wesithathu ukukhuthaza imikhankaso yexesha elifutshane okanye ukhuphiswano lwevidiyo olwenziwe ngumsebenzisi.
tags: cinefiniukuhlelaiphoneIphone appmovieukuhlela movie
I-Slideshare-Isidlakudla Esithuleyo sentengiso yokuqukethwe
Kutheni kufuneka uthumele amakhadi ngeli Holide
Novemba 29, 2011 ngo-2: 26 PM
ELI likamva lobuntatheli, ukwenza iifilimu, ukwenza intetho, kwaye ngubani owaziyo enye into. Itshintshi yomdlalo iyonke. Enkosi ngokwabelana 🙂
Novemba 29, 2011 ngo-4: 59 PM
Andiqinisekanga ukuba nabani na uyibonile imini apho siya kuba namandla angaka ezandleni zethu!
Novemba 29, 2011 ngo-6: 12 PM
Silibulele kakhulu inqaku, kunye namagama anobubele avela kuDoug naseZoomerang. Siyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba eli likamva levidiyo yentlalo. Sicinga ukuba u-2012 uyakuba ngunyaka weendaba zentlalo ezinophawu, kwaye siyathemba ukuba uCinefy anganceda ukukhokela intlawulo!
Novemba 29, 2011 ngo-8: 54 PM
Intle! Andikayizami le okwangoku, kodwa ijongeka ngathi yindlela entle yokufumana isandi esikumgangatho ophezulu kunye nevidiyo yakho (kwaye ikunike uzinzo ngakumbi) http://www.amazon.com/Fostex-Audio-Interface-Iphone-AR-4I/dp/B005DNAB12
Novemba 29, 2011 ngo-9: 10 PM
Ijongeka ngathi iyinto enye yokuseta! Ndiqaphele ukuba abantu bakwathengisa iilensi ezikumgangatho ophezulu ezixhonywe kwi-iPhone ngokunjalo. Izinto eziphambeneyo!